WARARKA BARAAWEPOST aRBACA 30 JANUARY 2008
SALDANADA TUNNI & MARAAXILKA
AY SOO MARTAY (QAYBTA KOOWAAD)
A F E E F: (30.01.2008)
waxaan Maqaalkaygan hordhac uga dhigaaya Aayadda uu Ilaahay ku yiri: “Kuwa xaqa rumeeyayow adeeca Eebbe oo adeeca Rasuulka & kuwa amarka leh oo idin ka mid ah, haddaad ku doodaan arrin u celiya Eebbe iyo Rasuulka haddaad tihiin kuwo rumeeyey Eebbe iyo qiyaamaha, saasaana khayr roon oo wanaag badan xagga abaalmarinta” (Suura An-Nisaa, aaya 59).
Haddaba, waxaan nafteeda & tan Odeyaasha, Waxgaradka, Siyaasiinta, Culimaa’udiinta iyo Indheergaratada Mujtamaca Reer Baraawe, isku waaninaynaa in aan Ilaah ka cabsano, awaamiirtiisana fulino si aan khayrkiisa, naxriistiisa iyo raxmadiisaba aan u kasbano, isla markaana aan uga badbaadno caradiisa iyo cadaabtiisaba. Aamiin.
Marka aan iska ilaalino “DULMIGA” iwm., maxaa yeelay, Dulmigu wax ma dhiso ee wax buu dumiya, wax ma kulmiyo wax buu kala firdhiya, wax ma wanaajiyo ee wax buu xumeeya, wax ma dhameystiro ee wuu kala dhantaala.
Walaalayaal, aan ka waantawno in aan “XAQIIQADA” qarino ama aan ka aamusno arrin aan xog-ogaal u nahay markhaatina ka furi karno oo sidaasna aan dembi ku galabsano. Ilaahay wuxuu yiri: “Yaa ka dulmi badan ruux qariya marag agtiisa Eebbe ku yeeshay. Eebana ma halmaamo waxaad falaysaan” (Suura Al Baqra, ayya 140).
Waxaa loo baahan yahay in la qaddariyo shahaadada(marag furka), sababtoo ah qof kasta waxaa waajib ku ah gudashadeeda iyo anshaheedaba (aadaaba taxamul wal adaa’).
Midda kale, aan ka fogaano in aan marin-habaabino mujtamaceena, siiba dhallinyaradeena iyo jiilka soo koraayo oo taariikh aan jirin oo been abuur ah u sheegno. Waa in aan xasuusana in taariikhdu aysan ahayn wax la iska qoro, ama la sameysto. Taariikh sidaas ma aha waa ka weyn yahay wax la iska qoro ama la iska sameysto.
Runta aan ka sheegno taariikhdeena, siiba dhinaca halganka Odeyaasha nasiibka u helay in ay huwadaan maqaanka Saldanada Beesha Reer Baraawe iyo maraaxilka ay soo martay saldanada.
Qodobadaas oo dhan, waxay iga ahaayeen “Hordhac & naseexo” oo an ugu googol xaaraayo “Maqaalkayga”, Allena waxaan ka baryayaa in uu nagu anfaco, camalkayagana ka yeelo mid Alle wejigiisa khaalis u ah.
Intaas kadib, waxaa mahad iska leh Allihii weynaa ee igu ilhaamay in aan soo uruuriyo “Maclumaadka taariikhda Saldanada Beesha Tunni” iyo maraaxilkii ay soo martay iyo dhacdooyin qaarkooda oo ku habboon in loo iftiimiyo dadka qaarkii oo uu jaha wareer ku dhacay, kadib markii la isku qabsaday mansabka Saldanada Tunni Shangamaas, Toddoba Tol iyo Toore cidda xaq u leh xilkaas.
Sida la ogsoon yahay, taariikhdu markay ahayd 20.01.2008, waxaa la sheegay in Magaalada Columbus (Ohio) lagu caleemo saaray Faqi Sayid Faqi in uu buuxiyo xilkii Suldaanimada ee uu aderkiisa Cumar Faqi ka geeriyooday iyo iyadoo dhowr beri ka hor taariikhdaas Demada Baraawe iyo Tuulooyinkeedaba ka dhaceen “Dabbaaldegyo & Damaashadyo” oo lagu soo dhaweenaayay Suldaan Xeydar Suufi Munye oo degaankiisa ku soo laabtay, kadib markii 18 sano Qurbaha ku sugnaa.
Akhristow: Maqaalkaani xaqiiqda taariikhdii Saldanadii Beesha Tunni ay soo martay oo dhan ma koobaayo, waayo Tunnidu waxay Baraawe soo degeen ka hor sannadka markuu ahaa 310 Hijriya. Ilaa qarnigaas Tunnidu waxay lahaan jireen nin Madax ah ama Hoggaamiye oo ay Beeshu ka dambayn jirtay, hase yeeshee, taariikhdu ma xusayso hababka iyo nidaamka ay u dooran jireen Hoggaamiyahooda ama sida ay isku beddeli jireen amase ay isku dhaxli jireen mansabka hoggaanimadeed.
Sidaas darted, taariikhda Saldanada Reer Tunni iyo maraaxilkii ay soo martay, waxaan ka soo qabtay xilligii “Boqortooyada Sayid Barqash”, xilligii Suldaankii la oran jiray “Sacad Binu Suldaan” oo ahaa kii ka aas-aasay Sinjibaar Dowlad Carabta ku abtirsata oo muddo ku siman 90 sano Isticmaarka ku haysatay “Muqdisho, Marka, Baraawe, Warshiikh iyo Kismaayo (1807/1896), iyo xilligii Boqortooyada Talyaaniga ilaa waqtiga xaadirka ah.
Haddaba, waxaa laga yaabaa in ay jiraan waxyaabo aan xaqiiqda waafaqsanayn haddii taariikhda dib loo raad raaco. Taas macnaheedu mahaa in aan runta ogaan u majara habaabiyey, laakin ay dhici karto in meelaha ama bugta aan ka soo uruuriyey ay sababta lahaayeen. Sidaas awgood, waxaan akhristayaasha ka codsanayaa in ay marka hore si fiican Maqaalka akhriyaan, haddii ay macluumaad xaqqiqda ka weecsan ku arkaan ay iyagu taariikhda dib u baaraan oo wixii khaldan saxaan ama anigu igala soo xiriiraan E.mailkan:
HALKAN KA AQRISO QAYBTA 2AAD 3AAD